कुकुर बाँध्ने बे’ल्टले सुशान्तको घाँ’टी थि’चेर मा’रिएको खु’लासा – " सुलभ खबर "
उनको घाँ’टीमा अङ्ग्रेजी अक्षर ओ आकारको (O) धर्का पाइएको थियो। यस्तो कसैले कसैको घाँ’टी थि’च्दा मात्र हुन्छ। देहत्याग गर्दा यस्तो आकार बस्दै बस्दैन। अर्को कुरा जब कसैले आफ्नो ज्या’न लिन्छ त्यतिबेला निजको आँखा वा जिब्रो बा’हिर नि’स्किन्छ। तर सुशान्त भैयाको यस्तो भएन। मसँग त्यसबेलाका यस्ता थुप्रै फोटोहरू छन्, जसले उनको ह’त्याको व’कालत गर्छ। त्यसैले यो ह’त्या नै हो। उनको ह’त्या उनकै कुकुर फजको बेल्टले घाँटी थि’चेर गरिएको हो। अब म खुसी छु किनभने यो केस सि’बिआइको हातमा छ। म चाहन्छु, चाँडै नै ह’त्यारा प’त्ता लागोस् र उसले फाँ’,सी,को स’,जा,य पाओस्।”
चीनमा फेरि भेटियो नयाँ संक्रमण, के हो ब्रूसेलोसिस र यो कसरी फैलन्छ ?
काठमाडौं। चीनको उत्तर पश्चिमी इलाकामा रहेको गेन्सू प्रान्तको लानजोउ शहरमा सयौं मानिसहरु एक नयाँ संक्रमणबाट
संयोग की सल्लाह, सी र मोदीको कसरी भयो उस्तै बोली ?
काठमाडौं। भारत र चीन निकै तनावपुर्ण स्थितीमा छन् । तर, सयुक्त राष्ट्रसंघको ७५ औँ वर्षगाठमा
सुशान्त मृ त्यु प्रकरण : दीपिका पादुकोण पनि मु छिइन्
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुत मृ त्यु प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको नाम पनि जोडिएको
बेलायतमा महामारीका कारण अझै जटिल दिन आउन सक्ने चेतावनी
थप उच्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा नराम्रो अवस्था आउनसक्ने उनीहरुले सोमबार चेतावनी दिएका हुन् ।कोरोना महामारीको
४ असोज: जापानमा विगत २४ घण्टामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४८० रहेको र थप चार
काठमाडौं । चर्चित चलचित्र निर्माता एवं निर्देशकमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । बलिउडमा चलिरहेको हरेक